Tom Howard - Jiri onye ọka iwu Cannabis mee ka azụmahịa gị si na Ahịa
Banyere Tom - onye ọka iwu cannabis
Nwere ikike na 2008
Nwa amaala nke Peoria, Illinois, Thomas Howard gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Illinois Wesleyan na Mahadum Marquette University.
N'ime oge omume ya, ọ nwetala ihe nrịba nke nde dọla, mezuo mkpebi ikpe yana nwetakwa ikike onye ahịa ya ebe ọ na-enye m ndụmọdụ etu esi belata ma oge na ego ọ na-eweta na mmejuputa nkwekọrịta site na ịgba akwụkwọ.
Ọ na-arụ ọrụ na Statelọ Ọrụ Akụ na ,lọ Akụ na Njikwa na Ọchịchị Illinois State Bar Association, Cannabis ma nye ya onyinye dị ka Ndokwa nke Super Lawyer dị ka onye ọka iwu na-apụ apụ site na ndị isi ndị ọka iwu kemgbe afọ 2015.
N'oge omume ya niile, ọ bụrụla onye ọchụnta ego lekwasịrị anya n'ịmepụta uru.
N’afọ 2013, Tom chọrọ ịkwụghachi ndị mmadụ ụgwọ maka ịzụta a novel nke o dere na 2010 iwu marijuana wee bulie echiche maka ngwa ịgba akwụkwọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ya na onye tinyekwara ya ego hibere ihe LLC ma wulie ngwa ịgba akwụkwọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, Callitik
Ọ malitere ịkụziri onwe ya nzere na otu sọftụwịa na ịntanetị si arụ ọrụ. Ọ rụọ ọrụ ma rụkọọ ọrụ na ndị otu niile nọ n'akụkụ ụwa niile, na-emepewanye netwọkụ nke ndị mmepe tụkwasara obi na ọ ga-atụkwasị obi maka idozi na injinia usoro ngwanrọ dị n'ofe nyiwe, na mgbakwunye na azụmaahịa dị oke mkpa na imewe ihe azụmahịa niile na ọnụnọ ntanetị chọrọ.
Mgbe o kwusịrị ma mụta ngwanrọ na azụmaahịa weebụ ruo ọtụtụ afọ, Tom Howard mepụtara ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ aha ya bụ Stumari iji nyere aka chepụta ihe, dịka saịtị a, yana ngwanrọ ndị ọzọ.
Gaa na Stumari
Immigrashọn mbata na ọpụpụ
N'oge opupu ihe ubi nke 2016, Tom Howard chọrọ ịmalite iji ihe ọmụma sọftụwia maka omume iwu ya. Ngwa visa H-1B batara n’oche ya, ọ makwaara na enwere ike dezigharị ya n’ihi ụdị data na olu ngwa ndị chọrọ ọkọlọtọ.
O mere ụfọdụ nyocha iji chọpụta nha nke ahịa na ịrịọ maka ụzọ edozi websaịtị iji gosipụta usoro azụmaahịa na-eche ihu mgbe ị na-anwa iwere ikike nka kachasị mma nke ụwa.
N'iji data a, Tom Howard gaghachiri ndị otu ya na Stumari wuru wee malite ịchepụta usoro ọhụụ maka okwu mbata na ọpụpụ ụlọ ọrụ. Ọbụghị naanị na visas ga-ekwekọrịrị ịgbanwee iwu site na Ọrụ Kwadoro na Mịnịsta Ala yana Onye isi ala ugbu a, mana mgbe ahụ, a ga-ejikwa ọkwa onye nwere visa ga-agbaso mgbe niile.
Mmepe ahụ na-aga n'ihu ruo taa ma na-enyere ndị mmadụ aka ịghọta Nrọ America ha.
Gaa Visas Work
N'ime oge ezumike ya n'ime afọ ole na ole mbụ ọ na-eme iwu, Tom Howard nyochara akụkọ akụkọ na usoro ikpe gbasara izi ezi nke iwu wii wii. O bipụtara akwụkwọ akụkọ sitere na nyocha ahụ n'okpuru pseudonym ya, Hoam Rogh. Dika o biputara na akwukwo abuo ndi ozo nke o dere n’oge ezumike ya na ulo akwukwo iwu.
Site na ebe ahụ, Tom Howard gbasaa nyocha ahụ gaa na mpaghara ndị siri ike nke iwu gọọmentị wee malite ibipụta na ikwu okwu n'okwu dị iche iche metụtara ụlọ ọrụ cannabis na-apụta. Dị ka onye ọka iwu na Peoria, Illinois, omume ya cannabis nwere njedebe ruo 2018, mgbe ọ malitere ọwa na YouTube na steeti ahụ wee malite njem iji mezuo iwu maka iji Okenye.
Still ka nwere ike ịhụ otu akwụkwọ ahụ o dere, mana bipụtara ya n'okpuru aha ọjọọ, na Amazon.
Nweta Akwụkwọ ahụ
Ka ọ na-erule 2018, Tom Howard arụọla ọrụ mgbazinye ego karịrị narị 100 ma hụkwa ịgba akwụkwọ ịgba akwụkwọ ga-amata usoro ya.
Ọ nọrọ n'ọkwa dị iche iche nke ụlọ ọrụ iwu wee bido ịhụ mmekọrịta ya na teknụzụ na nkà ịgba akwụkwọ ụlọ akụ.
N’ihi nke a, o hiwere isi ulo mkpoko dika ihe eji enyere ndi banki ahia aka ma gosiputa uzo okachasi nke ahia na ndi iwu ego.
Tom Howard na-agwakọta ngwanrọ ya na nkà iwu iji nye ụgwọ ịgba ụgwọ maka ịgba akwụkwọ ụlọ akụ azụmahịa, wee jiri data sitere na omume ahụ gaa n'ihu na-akwado ma na-emezigharị ọrụ ndị ahịa ya.
Onye ọka iwu Cannabis na Social Media
Tom Howard emeela nyocha nke ọma ma jeere ndị ahụ ozi cannabis ụlọ ọrụ chọrọ iwu kemgbe 2010. Ọ na-ebipụta akwụkwọ ugboro ugboro na nsogbu dị iche iche ụlọ ọrụ na-eche ihu ma na-anọchi anya ụlọ ọrụ ego na cannabis na ụlọ ọrụ ọhụrụ na mgbagwoju anya. Na 2018, Tom Howard malitere a YouTube Channel weputara webụsaịtị a ka iwelie ike ya na ijikọ ụlọ ọrụ cannabis.